NextMapping | काम को भविष्य
कसरी NextMapping™ कामको भविष्य सिर्जना गर्दछ
नेक्स्टमैपिंग both दुबै कामको भविष्यका साथै तत्कालका अन्य चरणहरूमा केन्द्रित गर्दछ। हाम्रो सम्मानित ग्राहकहरु यसलाई अर्को हप्ता, अर्को वर्ष, वा अर्को दस बर्षको लागि रणनीति बनाउन प्रयोग गर्छन्।
हाम्रो NextMapping ™ प्रक्रिया ग्राहकहरुलाई प्रगति को अविश्वसनीय छलांग बनाउन साथै कार्यस्थलमा दिगो परिवर्तनको लागि भविष्यको लागि तयार हुनको लागि सहयोग पुर्‍याउँछ।
नेक्स्टमैपिंग work कार्य निर्णय मोडलको अद्वितीय र स्वामित्वको भविष्य हो जसले ग्राहक / कर्मचारी र अन्ततः विश्वलाई तत्काल र दीर्घकालीन घाताon्कीय प्रभावका लागि कार्यवाही चरणहरूको साथ स्पष्टता सिर्जना गर्दछ।
नेक्स्टमेपिंग के हो?™ प्रक्रिया?
प्रत्येक व्यवसाय संग अनौंठो चुनौती र अवसरहरु छन्।
दर्जी र NextMapping डिजाइन गर्न™ तपाइँको लागि, हामी पहिले तपाइँ र तपाइँको टोलीसँग सम्पर्क राख्छौं - र आफ्नै प्रारम्भिक अनुसन्धान सञ्चालन गर्दछौं - तपाइँको 'वर्तमान अवस्था' को एक समझ कायम गर्न।
नेताहरू र टोलीहरूको लागि साझा चुनौती भनेको उनीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई एकल लेन्स वा परिप्रेक्ष्यमा हेर्छन्। अधिक समग्र दृष्टिकोण स्थापित गर्न, हामी विचारधारा दिन्छौं र हामी तपाईंलाई र तपाईंको टीमलाई तपाईंको संगठनमा पुनः परिचय दिन्छौं - कामको भविष्यको 'बहु दृष्टिकोणहरू' बाट।
संगठनको सामूहिक समझको साथ, हामी अब सोध्छौं, "यसले कसरी भविष्यको परिदृश्यमा नक्शा दिन्छ?" उदाउँदो र भविष्यको प्रवृत्ति दुवैबाट निर्माण अनुसन्धान डेटा द्वारा समर्थित हामी कसरी हुने भन्ने सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दछौं। भविष्यको लागि तयार अब।
कामको भविष्यका लागि प्रासंगिक रूपरेखाबाट सुसज्जित, हामी अब तपाईंको प्रतिक्रिया स collect्कलन गर्दछौं। प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, अन्तर्वार्ता र कुराकानीहरूको माध्यमबाट हामी तपाईं र तपाईंको टीमबाट भेला गरिएको डाटा समाहित गर्छौं र संयुक्त प्रतिक्रियालाई पुनरावृत्ति गर्दछौं।
सिकाईहरू र खोजी गरिएको विचारहरू क्याप्चर पछि, हामी तपाईंको संस्थाको लागि यसको मतलब केहि डिस्टिल गर्दछौं। हामीले थोप्लाहरू जडान गर्छौं, तपाईंको दृष्टि र तपाईंको नक्सालाई रूपरेखामा स्पष्ट रूपले रूपरेखा बनाउने कामको भविष्य तपाईंको व्यवसायको लागि कस्तो देखिन्छ।
हामीले तपाईंको भविष्यको कामको नक्शा सिर्जना गरेका छौं - अब लागू हुने समय हो। नेक्स्टमैपिंगमा अन्तिम चरण™ यो दर्शन वास्तविकतामा ल्याउनको लागि तपाईंको संगठन भित्र आवश्यक कार्यवाही चरणहरूको रूपरेखा हो।